Ehichapụ Photos na Notes! Olee otú iji naghachi?
Ọhụrụ edeturu ngwa na iOS 9 abịa na a ọnụ ọgụgụ nke nnukwu ọhụrụ atụmatụ na-agbụ ịgbanwe otú ị na-ahazi na atụmatụ. Ụfọdụ n'ime ya kasị ekwu banyere atụmatụ na-agụnye ndị na-esonụ;
Na New Notes ngwa, Apple nyeere e kere eke nke ọhụrụ nchekwa ma mee ka ọ dị nnọọ mfe n'ihi na ị na-akpali ndetu site na otu nchekwa ọzọ.
A ọhụrụ redesigned interface mere ka o kwe gị omume ele thumbnails gị na ndetu
Ọhụrụ formatting toolbar na-eme ka ọ dịkwuo mfe dezie gị na ndetu
Ị nwere ike tinye checklists n'ime gị ndetu.
Ị nwere ike isere osise kpọmkwem n'ime gị na ndetu
Ọ bụ mfe gbakwunye foto na vidiyo na ọhụrụ edeturu ngwa
I nwekwara ike ịgbakwunye web njikọ na map gị ndetu
Nsogbu na-Apple bụ ma na-chọta a ngwọta bụ ihe na-eme mgbe ị na mmadụ na mberede ihichapụ ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ ida a video ma ọ bụ foto mgbakwunye. Dabara nke ọma, e nwere ụzọ na-agbake ndị a faịlụ dị ka anyị ga-ahụ n'isiokwu a.
Olee otú naghachi ehichapụ video Mgbakwụnye na Cheta na iPhone
Iji naghachi-ehichapụ video mgbakwunye, ị na-aga mkpa ngwa na specializes na mgbake. N'ihi na iOS ngwaọrụ a ngwa bụ onye ọzọ karịa Wondershare Dr. Fone. Wondershare Dr. Fone e aha Ụwa 1st iPhone na iPad Data mgbake software. Ụfọdụ n'ime ya atụmatụ na-agụnye;
Ofụri Esịt dakọtara na Windows 10, iTunes 12, iOS 9.
Weghachiri mkpa data gụnyere ehichapụ ozi, foto, kọntaktị, videos na ọtụtụ ndị ọzọ si gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad.
Naghachi data ọbụna ma ọ bụrụ na ọnwụ rụpụtara a ure nke gị os
Enye gị ohere ịhọrọ faịlụ na ị ga-amasị naghachi
Na-arụ ọrụ idozi sistemụ arụmọrụ iDevices
Olee otú naghachi Notes Video mgbakwunye si iTunes ndabere
Nzọụkwụ otu: download na wụnye Wondershare Dr. Fone gị PC. Ẹkedori usoro ihe omume na pịa "naputa site na iTunes ndabere faịlụ." Ihe omume ga-chọpụta gị niile dị iTunes ndabere faịlụ na-egosipụta na ha na window.
Ị nwere ike ịhọrọ ndị ọhụrụ ndabere dị ka "kacha ọhụrụ na ndabere ụbọchị" ekenyela ọ bụla.
Nzọụkwụ Abụọ: Ozugbo i họrọ nkwado ndabere na mpaghara na e dere ihe video faịlụ ị ga-achọ naghachi, pịa "Malite iṅomi". O nwere ike buru oge ụfọdụ wepụ niile data na akpan akpan ndabere faịlụ nke mere-enwe ndidi.
Nzọụkwụ atọ: Ozugbo iṅomi zuru ezu, niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara ma hazie nkenụụdị. Ị nwere ike wee họrọ kpọmkwem video faịlụ ị ga-achọ naghachi na pịa "Naghachi."
Nzọụkwụ anọ: ịhọrọ ma ị chọrọ iji naghachi gị na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị ga-achọ naghachi ngwaọrụ gị, jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables.
Olee otú Naghachi Notes video mgbakwunye si iCloud ndabere
Nzọụkwụ Otu: Mgbe agba ọsọ Dr. Fone, pịa "naputa site na iCloud ndabere faịlụ." Ị ga-kpaliri ịbanye gị iCloud akaụntụ na aha njirimara na paswọọdụ.
Nzọụkwụ Abụọ: Ozugbo ị na-aka na iCloud, usoro ihe omume ga-egosipụta niile nke dị iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye ị chọrọ agbake video faịlụ site na mgbe ahụ pịa Download. Ị nwere ike iji "kacha ọhụrụ na nkwado ndabere na mpaghara ụbọchị kọlụm" ịhụ nkwado ndabere na mpaghara ị na-achọ.
Nzọụkwụ atọ: na popup window họrọ faịlụ na ị ga-amasị ibudata. Na nke a ọ bụ ehichapụ video faịlụ na ị mmasị ka ndị edeturu. Ozugbo ị nwere ya, pịa na "iṅomi" button na-amalite. Usoro nwere ike iri oge ụfọdụ otú enwe ndidi.
Nzọụkwụ anọ: Ozugbo Doppler bụ zuru ezu, ị ga-enwe ike ihuchalu niile nke data na iCloud ndabere faịlụ họrọ. Ego site na ndepụta site na họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi, ke idaha ọ bụ video faịlụ. Pịa na "Naghachi" button ịzọpụta faịlụ gị na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ naghachi faịlụ ngwaọrụ gị kama nke na-azọpụta ya na kọmputa gị, Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị n'oge ikpeazụ nzọụkwụ.
> Resource> iPhone> ehichapụ Photos na Notes!